Sirdoonka dalka Qadar oo saameyn weyn ku yeeshay Madaxtooyadda Soomaaliya. – Madal Furan
Hoy > Warka > Sirdoonka dalka Qadar oo saameyn weyn ku yeeshay Madaxtooyadda Soomaaliya.
Sirdoonka dalka Qadar oo saameyn weyn ku yeeshay Madaxtooyadda Soomaaliya.
Muqdisho (Madal Furan) – Loolanka siyaasadeed ee ka dhashay khilaafkii dowladdaha Khaliijka ayaa wuxuu raad muuqda ku yeeshay siyaasadda Soomaaliya, wuxuuna cagga dhigtay xarunta Madaxtooyadda DFS ee Villa Somalia.
Dowladaha Qadar iyo Imaaraadka Carabta ayaa la dareemayaa in xiligan ay noqdeen kuwa isku baacsanaya gacan ku haynta siyaasadda Soomaaliya, waxaana soo shaac baxaya in dowladda Qadar ay firfircooni u yeelatay inay gudaha u gasho xarunta Villa Somalia ee laga hogaamiyo dalka soomaaliya.
Dalka Qadar ayaa wakhti aan fogeyn uu bilowday xiriir diblomaasiyadeed oo ay la sameystaan Madaxweynayaashii soomaaliya isaga danbeeyey qaarkood, waxaana xiligan Madaxtooyadda Villa Sooamaliya ka ah Agaasime Guud Fahad Yaasiin oo ah ninka la rumeysan yahay inuu hogaanka u hayo siyaasadda dowladda Qadar ee dalka Soomaaliya.
Isjiidjiidka siyaasadeed ee u dhexeeya Qadar iyo Imaaraadka Carabta ayaa waxaa ka dhashay Afar arrimood oo la rumesyan yahay in dowladda Qadar ay ku wiiqayso siyaasadda dalka Imaaraadka Carabta ee ku wajahan dalka soomaaliya.
Warar ay Madal Furan ka heshay ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Sirdoonka dalka Qadar ay ogaadeen Lacag fara badan oo Doolar ah ay ku wajahan tahay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
Sirdoonka Qadar ayaa la sheegay inayn fariintaas u gudbiyeen Agaasimaha Madaxtooyadda Villa Somalia Mudane Fahad Yaasiin, dabadeedna ay fududaatay in ciidamadda amaanku ay qabtaan lacagtaas iyo diyaaradii siday.
Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa ku doodeysa in lacagtan ay qayb ka tahay mushaharka iyo adeega ciidamadda ay tababaraan ee soomaaliya gaar ahaan Muqdisho, Punland iyo Galmudug ku kala sugan.
Dowladda Federaalka Soomaaliya war saxaafadeed ka soo baxay ayaa lagu sheegay in lacagtaas baaritaan lagu sameyn doono.
Arrintu siday doonto ha ahaatee, Sirdoonka dalka Qadar ayaa la rumesyan yahay inay horayba ugu guuleysteen arrimaha ay ka mid yihiin:-
Weerarkii 8dii bishii December 2017 loo geystay guriga C/shakuur C/raxmaan oo ka mid ah siyaasiyiinta magaaladda Muqdisho sida weyn looga yaqaan.
weerarkii ka dhacay guriga Sanetor Cabdi Qaybdiid 30kii December 2017 oo loo adeegsaday ciidamadda ay tababaraan dowladda Imaraadka Carabta.
12kii Maarso 2018 Go’aankii shirkadda DP World dalka looga saaray oo dhacay maalintii markii uu furmay kalfadhigii Baarlamaanka.
Maxkamad dil ku fulisay Nin lagu eedeeyay in uu kufsi ka geystay gobolka Gedo